Maringe neNorway ndege yeWiderøe iri kutonhodza kwazvo COVID-19 dutu zvakanaka
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Norway Kuputsa Nhau » Maringe neNorway ndege yeWiderøe iri kutonhodza kwazvo COVID-19 dutu zvakanaka
Airlines • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Investments • nhau • Norway Kuputsa Nhau • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Norway Airline Wideroe CEO
Executive Executive weCommercial Aviation paAviation Vhiki Network, Jens Flottau, akagara pasi nemukuru mukuru weNorway wedunhu rinotakura, Widerøe, Stein Nilsen.
Widerøe inonyanya nendege yemumba inoshandisa zvikepe zveDash 8s uye Embraer 190E2s munzira yakaoma yedhiraini, kunyanya kumahombekombe ekumadokero kweNorway.
Kwenguva yakati muchikamu chekutanga cheCVV-19 denda, Widerøe yaive ndege yakanyanya kubatikana muEurope ine ndege dzinosvika mazana maviri pazuva.
Widerøe inobatanidza nzvimbo dziri kure munyika, dzimwe nguva ichibhururuka mapfupi mafupi emakiromita mashoma uye dzimwe nguva mune yakanyanya mwaka yechando mamiriro.
Asi haisi iyo nyaya izere. Widerøe ndeimwe yendege dzinonetsa kwazvo mukutyaira nharaunda uye shanduko yezvakatipoteredza. Iri kuongorora ichishandisa ndege dzese dzemagetsi, kwazvinogona mumambure, sezvo hurumende yeNorway ichida kuti nendege dzekutanga-dzese dzemagetsi dziende pakati pegumi.
Verenga - kana teerera - zvinotaurwa naJens Flottau naStein Nilsen pamusoro pe CAPA - Center yeAviation chirongwa chiitiko pano. Kutanga, ivo vanotarisa ikozvino COVID-19 mamiriro mune avhiyesheni.
Ngatizivei kuti Widerøe akashanda sei panguva yedenda. You had to cut back as many others did, but not as most extremely as many of your [inaudible 00:03:14], handizvo?
Hongu, ichokwadi, asi kwatiri isu sevamwe vese muindasitiri yekufamba, yanga iri yakaoma mwedzi gumi neshanu ipapo kubva munaKurume 15. Asi isu tine yakanyanya, yakakosha network muNorway. Yakaita senge yekufambisa yeruzhinji mune dzimwe nzvimbo dzemaruwa eNorway, kunyanya. Saka zvirokwazvo, zvave zvakanyanya kutarisisa pakuchengeta yakanaka yekufambisa system zvakare panguva yedenda.
Isu tave tichingobhururuka tichitenderedza 70 kusvika 80% yeyakajairwa kugona, yakawanda yenguva mukati memwedzi gumi nemashanu yekupedzisira. Isu tave takadzikira mune chaiwo, akasarudzika madenda mamiriro, asi takatenderedza 15 kusvika 70%, isu takabhururuka. Hafu yeiyo 80% ndiyo nzira yePSO nzira muNorway, uye ndiyo yakakosha mambure kumaruwa.
Isu takakumbirwa nebazi rezvekutakurwa kuti tirambe tiine huwandu hwepamusoro hwekugadzira pane iwo network, kunyangwe paine zvakaderera kabhini zvinhu zvekutsigira nharaunda dzemunharaunda mukuchengetedza yakanaka yekufambisa kupihwa zvakare mune yakasarudzika mamiriro Ehezve, isu tinofara kwazvo nerutsigiro irworwo rwekufambisa uyezve kunopihwa imwe muripo kwatiri uye kune vamwe vanoshanda pane network yePSO muNorway.
Tine ndege diki, yendege yeSweden, inonzi Air Leap, uye tine lift yekufambisa kuchamhembe kweNorway, zvakare ichibhururuka pane network yePSO. Saka hurumende muNorway yaita zvakawanda zvakawedzera uye zvinoshamisa kuita chengetedzo yakanaka ichipfuura nedenda.
Saka iwe urikuti 70 kusvika 80% yeWideroe yako kugona kwaive kuchiripo, asi iwe unogona kutaura kuti mangani nhamba dzevatakurwi dzakadonha?